Socialite.js साथ आलस्य लोड सामाजिक बटनहरू Martech Zone
आज म एन्जीको सूचीमा वेब टीमको साथ एक शानदार दिन थियो। एन्जीको सूचीले तिनीहरूको साइटलाई अविश्वसनीय संसाधन लाइब्रेरीमा विकास गर्दैछ ... र ती सबै उनीहरूले आफ्नो साइटको गति निरन्तरता दिइरहेका छन्। तिनीहरूको पृष्ठहरू अन्धा गतिमा लोड हुन्छन्। यदि तपाईं मलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने यस पृष्ठ पप अप गर्नुहोस् ग्यारेज ढोका.
पृष्ठले छविहरू, भिडियो, र सामाजिक बटनहरू समाहित गर्दछ ... र अझै मिलिसेकेन्डमा लोड गर्दछ। मेरो साइटसँग तिनीहरूको तुलना गर्नु भनेको एफ 16१ with को साथ प्रिमस रेसि like जस्तै हो। तिनीहरू अझै गरी सकेनन्, कि त, सधैं ग्राहक अनुभव सुधार गर्न को लागी तरवारहरू खोज्दै सामग्री फेला पार्ने र साझेदारी गर्ने।
हामीसँग पूर्ण-समय विकास टोली छैन न सार्वजनिक कम्पनीको स्रोतहरू, त्यसैले हाम्रो प्रगति एन्जीको सूची भन्दा अलि ढिलो छ। हामी संग एक अविश्वसनीय होस्ट छ Flywheel - उनीहरूको उन्नत क्यासिंग र CDN को उपयोग गर्दै, तर हामीलाई थाहा छ कि हामीलाई अझै चोट पुर्‍याउने केहि चीजहरू छन्। उदाहरण को लागी, हाम्रो छविहरु अनुकूलित छैन। त्यहाँ बाहिर सेवाहरू छन् कि तपाईं आफ्नो छविहरू तिनीहरूको आकारको एक अंशमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ जबकि तिनीहरूको स्पष्टतालाई कायम राख्दै ... हामी तिनीहरूलाई हेर्दै छौं।
जब म तिनीहरूलाई हाम्रो साइट देखाउँदै थिएँ, मैले क्रिged्गिंग गरें र मेरो टाउको टुक्रिएको थियो जस्तो कि पृष्ठमा सामाजिक बटन लोड गर्दा फ्रिज भयो। मलाई लाग्छ यो फेसबुक थियो। अर्ग ... एक वा दुई पछि बटन देखा पर्‍यो र बाँकी पृष्ठ लोड भयो। उह।
जब मैले मुद्दा वर्णन गरेको थिएँ, तिनीहरूका इन्जिनियरले तुरून्त समाधान खोज्यो, socialite.js। सोसाइलाइटले सामाजिक साझेदारी बटनको अधिकता कार्यान्वयन गर्न र यसलाई सक्रिय गर्नको लागि एक धेरै सजिलो तरीका प्रदान गर्दछ - कुनै समय तपाइँको इच्छा। कागजात लोडमा, लेख होभरमा, कुनै पनि घटनामा! चूंकि सोसाइटले बटनहरू एसिन्क्रोनसले लोड गर्दछ, कागजात ह्या hang्ग हुँदैन जब won't० केबी सोशल मिडियाको लागि प्रतिक्षा गर्दै।
धन्यबाद, त्यहाँ पहिले नै एक WordPress प्लगइन हो कि सोसाइट, भनिन्छ WPS सोसायटी। आज राती मैले बटनहरू लोड गर्नका लागि मेरा सबै अनुकूलित कोड बाहिर निकाल्यो र WPSocialite लागू गरें। म CSS लाई अनुकूलित गर्न र मैले चाहेको बटनहरू परिमार्जन गर्न सक्षम भयो। म भविष्यमा थप भइरहेको केही थप बटनहरूको लागि हेर्दै छु - जस्तै बफर वा रेडडिट… तर यो अहिलेका लागि उत्तम छ!
टैग: जाभास्क्रिप्टअल्छी लोडअल्छी लोड बटनहरूसामाजिक बटनsocialitesocialite.jswpsocialite
किनभने गुगलले त्यसो भने